मध्यरातमा माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेल आफ्नै कार्यकर्ताबाट कुटिए | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more मध्यरातमा माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेल आफ्नै कार्यकर्ताबाट कुटिए
माघ १२ गते, २०७४ - १४:२२
बागलुङ । बागलुङ २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद एवं माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेल आफ्नो गृहजिल्लामा आफ्नै कार्यकर्ताबाट कुटिएका छन् ।
बिहीबार राती ढोरपाटन नगरपालिका १ बुर्तिबाङ बजार स्थित मिराज होटलमा माओवादी केन्द्र आयोजक समितिका सदस्य तुल्सीराम अर्यालले नेता पौडेल र बागलुङ २ प्रदेश सभा (ख) का सांसद टेकबहादुर घर्ति मगरलाई कुटपीट गरेका हुन। सांसदद्वयसँगै पौडेलका अंगरक्षकलाई समेत अर्यालले हात हालेका थिए ।
अर्याललाई पार्टीले पटक–पटक झुठा आश्वासन दिंदै आएको भन्दै उनले कुटपीट गरेको स्किार गरेका छन् । सांसदद्वलाई कुट्नुका कारण स्वीकार्दै अर्यालले भने, ‘चुनावताका दीनानाथहरूले के भनेका थिए ? अहिले क्षेत्र खाली छ । म आफ्नो स्वाभिमानमा छु । हामीलाई दास बनाउँदाको अभिव्यक्ति हो’ ?
माघ १२ गते, २०७४ - १४:२२ मा प्रकाशित